Tsy nahazo fahafahana vonjimaika ihany koa ny tenany fa naverina any amin’ny fonjan’Antanimora mandra-pivoakan’ny didim-pitsarana. Tsy nahafaly ireo mpomba azy efa tonga teny an-toerana io ka raikitra ny horakoraka hoe “Sambory ihany koa i Claudine”, izay malaza amin’ny kolikoly eto amin’ny firenena. Vesatra hanenjehana azy ny fitarihana fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana, fanohintohinana filaminam-bahoaka, fandorana tanety, halatra basy. Toa mibahan-toerana anefa ny lonilony politika nisy tany aloha, ka ny filoham-pirenena sy ireo manodidina azy mihitsy no mandentika azy, raha ny resaka mandeha. Voalaza fa anisan’ny olona mpanery sy mpanao didy jadona amin’ny fitakiana sy famoaham-bola tao amin’ny minisiteran’ny vola i Augustin Andriamananoro fony nitantana io minisitera io ny filoha ankehitriny, ary nahavita nanevateva sy nirehareha fatratra ho akaiky kokoa an’i Andry Rajoelina izy. I Hery Rajaonarimampianina kosa natao saribakoly sy mpanaraka baiko ary irakiraka fotsiny. Raha tsiahivina, fotoana fohy taorian’ny nahalany an’i Hery Rajaonarimampianina dia nodakana teo amin’ny toerany ireo voalaza fa nampijaly azy toa an’i Haja Resampa Sekretera jeneralin’ny prezidansa sy ny tale jeneralin’ny OMERT, Augustin Andriamananoro. Tombanan’ny mpanara-baovao politika fa valifaty politika ny zava-misy ankehitriny. Efa nisy ny vaovao fa nivoaka hosamborina i Haja Resampa noho ny fanohintohinana ny fitondrana saingy nahay niala ary toa efa tsy eto Madagasikara intsony. Nandritra ny raharaha Soamahamanina ihany koa dia nisy ny vaovao nivoaka fa nanao teny marary tamin’ny Tale kabinetran’ny vadin’ny filoha ny tenany. Afak’omaly dia nitsidika an’i Augustin Andriamananoro teny Antanimora ny Masoivohon’i Frantsa Véronique Vouland saingy tsy nisy nipika kosa ny resaka.